Maitiro ekugadzira mitambo yemitambo pane yako GNU Linux uye Android kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Chekutanga pane zvese, tsanangura chii chinonzi Gameplay kana uchiri kusaziva. Kunyangwe kana iwe ukatsvaga iyo dudziro mune yakasarudzika duramazwi inogona kukupa iwe dzakasiyana tsananguro, senge nzira yekudyidzana nemutambo wevhidhiyo, izvo zvatiri kutaura nezvazvo pano ndiyo tsananguro iyo inoreva kune yakanyorwa mutambo wevhidhiyo mutambo. Izvi zvakarekodhwa zvinogona kunyorwa kare uye kurarama, apo mutambo uchiridzwa, panopatsanurwa skrini kana miniscreen pakaonekwa kumeso kwemutambi uye zviri kuitika mumutambo wevhidhiyo.
Kune izvi, zvatove kune maturusi mazhinji iyo yatinogona kushandisa pamwechete nemakrofoni yedu, webcam yedu kana kamera yekumberi yefoni mbozhanhare pane iyo Android. Uye izvi ndizvo zvinoshandiswa nesoftware zvatichakurukura muchinyorwa chino, kukupa sarudzo dzekugadzira yako mitambo yemitambo iwe uchiridza mitambo yaunofarira yemavhidhiyo zvese paApple uye pane yako desktop Linux kugovera ...
Zve Android: Unogona kuve nesarudzo dzakapihwa neMitambo yeGoogle Play pachayo. Ane sarudzo yakasanganiswa yekuchengetedza zvinyorwa zvemitambo inoenderana yaunowana muGoogle Play Store. Izvo zvakarekodhwa mune ino kesi zvichave 720p resolution. Kana iwe usina kugutsikana nebasa reGoogle, pane mamwe maapplication muGoogle App Store ayo, akadai seKamcord. Iyo yekupedzisira inotobvumidza iwe kutepfenyura yako skrini live kana uchida.
ZveGNU / Linux: Iwe unogona kushandisa ese maviri screencast zvirongwa sezvataona pane dzimwe nguva kunyora izvo zvinoitika pachiratidziri kana kushandisa zvimwe zvakasarudzika zvekushandisa mitambo yemitambo, senge ScreenStudio. Iko kunyorera kwakanyorwa muJAVA uye nekudaro kunogona kushandiswa pane chero system. Iyi software yakanyatso kukwana uye ine sarudzo dzekutepfenyura izvo zviri kunyorwa mukushambadzira kana kuzvisanganisa neTwitch-senge sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekugadzira mitambo yemitambo pane yako GNU Linux uye Android kugovera